Hamro Kantipur | देशभर हालसम्म अट्ठाइस प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप देशभर हालसम्म अट्ठाइस प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप
देशभर हालसम्म अट्ठाइस प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपालमा हालसम्म एक करोड २९ लाख मात्रा खोप लगाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये २८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाएका छन् ।
बाँकीले पूर्ण मात्रा पाएका छैनन् । उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ७८ लाख ५८ हजार ७१० मात्रा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आएको छ । नेपालले विभिन्न देशबाट उक्त खोप ल्याएको हो । आएका खोपमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनको भेरोसेल खोप रहेको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलका अनुसार भेरोसेल खोप मात्रै नेपालमा एक करोड १९ लाख मात्रा खोप आएको छ । त्यसपछि धेरै आउनेमा भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप रहेको छ ।
कोभिसिल्ड २४ लाख ४८ हजार मात्रा खोप भित्रिएको छ । यस्तै बेलायतमा उत्पादन भएको अस्ट्राजेनेका खोप १९ लाख ७५ हजार ८६० मात्रा, जोनसन एन्ड जोन्सन १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा रहेका छन् ।भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज खोप नेपाल आएपछि गत माघ १४ गतेबाट नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको थियो ।
खोपपछि कोरोना सङ्क्रमणदर ५२.३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रवक्ता पौडेलले गत महिनाको तुलनामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको जानकारी दिनुभयो ।गत महिना ३६ हजार ८६१ जना अर्थात् ४.८६ प्रतिशत सक्रिय सङ्क्रमित रहेकोमा अहिले घटेर १८ हजार ४२२ अर्थात् २.३२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै डा. पौडेलले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू अझै पनि धेरै रहेकाले सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।यसैबीच गत २४ घण्टामा देशभर एक हजार १५७ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले थप एक हजार ११३ जना निको भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै थप आठ जना सङ्क्रमितको निधन भएको छ । गाेरखापत्रबाट